स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मणिपाल अस्पतालसँग स्पष्टीकरण माग « प्रशासन
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मणिपाल अस्पतालसँग स्पष्टीकरण माग
काठमाडौँ । मुस्ताङको कागबेनीमा शनिबार भएको दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुलाई आकस्मिक उपचार सेवा नदिएको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयले घटनाको छानविन गर्न चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वीर अस्पतालका डा. ढुण्डीराज पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा रहेका छन् । समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
Tags : मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय
29 November, 2021 4:33 pm
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २५९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण , २६४ जना निको
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २५९ जनामा कोरोना
29 November, 2021 3:44 pm
वाग्मती । मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म ५९ प्रतिशत नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप
29 November, 2021 1:06 pm
ओमिक्रोन भेरिएन्ट कति घातक छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान हुँदै छ : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हालै अफ्रिकामा देखा परेको भनिएको